နှင်းမိုး: ကဲပြောလိုက်စမ်းမယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ
မရေးတာလဲ တော်တော်ကြာပါပြီ ဟိုလုပ်ဒီလုပ် နဲ့ကိစ္စလေးတွေရှုတ်လို့ ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးမှိတုန်း ဘလော့တကာ ဘလော့ လိုက်လည်ဖက်လိုက်တော့ ပဲခူးက နှစ်လောင်းပြိုင်လူ သတ်မှု ကိုရောက်သွားတော့တာဘဲ ဒီသတင်းက ဒီသီတင်းအပတ် အတွက်တော့ သိပ်ဟစ်ဖြစ်တာ ပေါ့ ၊ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ ကိုယ်ကပါ မခံချင်ဖြစ်ပြီး ၀င်စိတ်ဆိုးလိုက်သေး တာကိုး ပြည်သူမို့ လား ခင်မျ ၊ ကိုယ့်လူထိ တော့ဘယ်ခံချင်ပါ့မတုန်း အကိုတစ်ယောက်လဲ တပ်ထဲရှိပါရဲ့ သူကတော့ ခလရ ၅၉က ဗိုလ်ဆိုတဲ့ လူလောက်တော့ မိုက်ဘူးထင်တာပါဘဲ ပညာလဲတတ်သမို့ လား ၊ အခုတော့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း လူသတ်မှုအပြင် မသာဣနြေ္ဒပျက် မှုပါ ပါလာ တော့ လက်ကလေးကလည်း သိသလောက်ခလေးနဲ့ ရေးချင်ပြန်ပါရော ဗျာ ။
အခုဟာက အရပ်သားအခြင်းခြင်း ဖြစ်တဲ့လူသတ်မှု မျိုးမဟုတ်ပေဘူး မို့လား ၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ဖြစ်တာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာတောင် ၊ သာမန်အရပ်သား အာဏာပိုင် မဟုတ်ပေဘူး ၊ ကြည်း ၊ရေ ၊ လေ စတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကနေ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရယ်ပါ ၊ အစိုးရပိုင် FM သီတင်းဋ္ဌာန နဲ့ ပိတောက်မြေ အသံလွှင့်ဋ္ဌာန ကတော့ အရပ်သား မောင်ရင်နှစ်ပွေ သေနပ်လုလို့ ၊ တပ်က ပြစ်သက်လိုက်တယ် လို့ ကျေညာသွားတာဘဲ ၊ အခင်းဖြစ်တာက ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းကနိုင်း တောင်ပိုင်းမှာ ၊ လာပြစ်တာက မြောက်ပိုင်းဆိုတော့ လုတယ်မလုဘူး ၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ် ဘူးကတော့ ဖက်တဲ့သူရဲ့ တာဝန်ပေါ့ ၊
ဖြစ်တဲ့နေရာက ကယ်လီဖိုးနီးယား အရက်ဆိုင်ဆိုဘဲ ၊ အရာရှိမင်းများက တပ်ထဲကထွက်လာပြီး ဇရပ်မင်းစည်းစိမ် လာယူတော်မူဟန်ရှိပါရဲ့ ၊ အခင်းဖြစ်တဲ့ အချိန်နဲ့ဆိုရင် တပ်မတော်အရာရှိ တဦးဟာ အရပ်ထဲက ဘုံဆိုင်မှာ ရှိကိုမရှိသင့်တဲ့ အချိန်ဘဲမဟုတ်လား ၊ ဆိုင်ကယ်အမြီးချင်း ချိပ်မှိ တာစိတ်ဆိုးလို့ ၊ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရာရှိမင်းအနေနဲ့ ပြန်လှန်ထိုးကြိတ်ပေါ့ ၊ နောက်ဆုံးဗျာ မကျေနပ် သေးဘူးဆိုရင် ဆိုင်ရာ ရယက ကိုခေါ်အပ်ပြီး ထုခိုင်းလိုက် အမိန့်လေးသုံးပြီး ၊ အခုတော့ တပ်ခွဲတခွဲလောက် ရှိတဲ့အင်အားကို လွတ်ပြီး ကျည်ကပ်လိုက် ကုန်အောင် ပြစ်သတ်တယ် ဆိုတော့ နဲနဲတော့ တွေးကြည့်ကြအုံးလေ ။
အခုခေတ် တပ်မတော်ကြီးကလဲ အရာရှိတွေတောင် ဥပဒေကို မသိတော့ပေဘူး လက်အောက်က ဟာတွေဆိုတာတော့ ထမင်းရှာမစားတတ်လို့ တပ်ထဲဝင်နေကြတာဘဲ ရှိတယ် ၊ အောက်ကတပ် သားတွေခင်မျာလဲ ၊ ပြစ်ဆိုပြစ်တာဘဲ ဘာမှန်းညာမှန်းကိုမသိဘူး လူနေရပ်ကွတ် ထဲမှာသေနပ် စစ်ဆင်ရေး တရပ်လို သေနပ်ဝင်ဖောက်တာ ကတော့ မင်းမဲ့ယုံတင်မဟုတ် ရှိကိုမရှိတဲ့ သဘောဘဲ လေ ၊ တပ်တွင်းမှာလဲ တပ်တွင်းဥပဒေဆို တာတော့ရှိမှာပါ ၊ ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍကို ရာထူးအာဏာ ပါဝါကိုအသုံးချပြီး တပ်တွင်းဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာမှန်း သိပါလျှက်နဲ့ လက်အောက် အမှုထမ်းကို အပြစ်ကျုးလွန်စေတာဟာ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ပါတယ် ၊ သေတာမသေ တာအပထားပေါ့ ဗျာ..။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကျင့်ထုံး ရာဇသတ်ကြီး အပိုင်း(၆-ခ)ကြည်း ၊ရေ ၊လေ တပ်နှင့်ဆိုင်သော ပြစ်မှုများမှာ ပုဒ်မ ၁၃၈ ၊ စီးကမ်း ဖီဆန်မှုကိုပြု ရန် တပ်သားကို အားပေးကူညီခြင်း ၊Abement of act of insubordindtion by soldier, soilor or airman. (section-138) အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက်ကတော့ ၊ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်၏ ကြည်း ၊ရေ ၊ လေ တခုတခုတွင် အမှုထမ်းနေသော တပ်သား သို့မဟုတ်အရာရှိ၏ ပြုလုပ်မှုသည် ၊ စည်းကမ်း ဖီဆန်ရာရောက် ကြောင်းသိလျှက် ထိုပြုလုပ်မှုကို အားပေးကူညီသည်တွင် ၊ ထိုအားပေး ကူညီခြင်းကြောင့် စီးကမ်းဖီဆန် မှုကို ကျုးလွန်လျှင် ထိုအားပေးကူညီ သူကို ခြောက်လထိ ထောင်ဒဏ် အမျိုးမျိုးဖြစ်စေ ၊ ငွေဒဏ်ကိုဖြစ် စေ ၊ နှစ်ရပ်လုံးကို ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည် ။ လို့ပါရှိပါတယ် ထိုကျုးလွန်မှုဟာ လူသက်မှုမြောက်တဲ့ အထိ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၃၀၂) နဲ့ တွဲဖက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒါကအာဏာ တပ်တွင်းအာဏာကို ဖီဆန်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားကို အားပေးအားမြောက် ပြုတာဘဲရှိသေး တာပါ ။
အကျုံးဝင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေရှိပါသေးတယ် ၊ အဲဒါတွေကတော့ ကြည်း ရေ လေ တပ်တခုခု၏ တပ်သား သို့မဟုတ် အရာရှိ၏ ပြုလုပ်မှုသည် ၊ စီးကမ်းဖီဆန်မှု ပြုရာရောက်ခြင်း ။ စည်းကမ်းဖီဆန် မှုပြုရာရောက်ကြောင်း သိလျှက် တရားခံအား အားပေးအားမြောက်ပြုခြင်း (ဥပမာ အမိန့်ပေးစေခိုင်းခြင်း) အားပေးကူညီ သည့်အတိုင်း စီးကမ်းဖီဆန် မှုကိုကျုးလွန်ခြင်း စတဲ့ အချက်သုံးချက်လုံးနဲ့ ညီညွတ်မှ သာ ဒီဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပါတယ် စွန်းတယ်မစွန်းဘူးကတော့ စာဖက်သူ တာဝန်ပေါ့ဗျာ ။
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ်ဗျ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် ဆိုင်သော ပြစ်မှုဥပဒေ ဆိုတာ ပုဒ်မ ၁၆၆ မှာ ပည်သူ့ဝန်ထမ်းက တဦးတယောက်သော သူကို နစ်နာစေရန် ကြံရွယ်၍ ဥပဒေကို ဖီဆန်ခြင်း ၊ Public servent disobeying law with intent cause injury t0 any person. (section-166) အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက်မှာကတော့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတဦးသည် ပြည့်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဖြင့်လိုက်နာရ မည့် ဥပဒေ ညွန်ကြားချက်ကို ဖီဆန်ခြင်းဖြင့် ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက် သောသူအား နစ်နာစေရန် အကြံနှင့် သော်လည်း ၊ နစ်နာစေတန်သည်ကို သိလျှက်နဲ့သော် လည်းကောင်း ထိုဥပဒေ ညွန်ကြား ချက်ကို သိလျှက်ဖီဆန်လျှင် ထိုသူကို အလုပ်မဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် ကိုဖြစ်စေ ၊ ငွေဒဏ် ကိုဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးကို ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ရာဇသတ်ကြီး ကျင်းထုံးတွင် ဆိုပါ၏ ။
ဒါကဥပဒေစာအုပ် ထဲကဟာတွေ ဖက်ပြီးပြောတာ အပြင်မှာ ဥပဒေအထက် ဘယ်သူတွေရှိမှန်း မသိဘူး တချို့ကတော့ ခြင်္သေ့တွေ တဲ့ တချို့ကတော့လဲ အစိမ်းကောင်တွေတဲ့ ရွှေပြည်ကြီးမလဲ ဘုရားကားအောက် မျောက်ကား အထက်ဖြစ်နေတာ တွေက မဆန်းတော့ဘူးမလား ဗျ ၊ နိုင်ငံဝန် ထမ်းဟာ နိုင်ငံသားအတွေ အပေါ် တရားလက်လွတ် နိုင်ထက်ကလူ ပြုတာတော့ နိုင်ငံသား တိုင်း ခံချင်ကြမယ် မဟုတ်ပါဘူး ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနဲ့ ပြည်သူဆိုတာေ၇နဲ့ကြာ ကမ်းနဖူးနဲ့ ဒီရေ အမြဲတွဲစပ် နေရတာမို့ ညီညီညွတ်ညွတ် ပြေပြေလည်လည် ဆိုရင်တော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့ အခု ဟာက သေတဲ့လူလဲ သေသွားပါပြီ ၊ တရားခံ မဖြစ်သေးတဲ့ လူတွေလဲ မဖြစ်သေးပါဘူး ၊ အဲတော့ ဗျာ စာဖက်သူတို့လဲ စဉ်းစားပေါ့ ဇေလဲစဉ်းစားလိုက်အုံးမယ် ၊ တရားဆိုတာ နတ်စောင့်ပါတယ် အမှန်တရား အတွက် အချိန်တခုလိုပါတယ် ၊ ပြည်သူတွေ အတွက် မျှတမဲ့ အချိ်န်တခုတော့ မုချ ရှိလာမှာပါ အဲဒီအခါ ကြမှပေါင်း ပြီးစီရင်တာပေါ့ဗျာ ဥပဒေနဲ့ တွေအကြောင်း ပြောလာခဲ့တာမို့ ဥပဒေ စကားလေးတခုနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါ့မယ် တွေးခေါ်ပညာရှင် ကြီးဆော့ခရတ္တိရဲ့ စကားတခွန်းရှိပါ တယ် “လက်နက်မဲ့နဲ့ လက်နတ်ရှိသူ ရန်ဖြစ်ရင် လက်နက် ရှိသူဟာ အမြဲတမ်းရှုံးပါသတဲ့” ၊ အခုကိစ္စဟာ လက်နက်မဲ့တွေ သေကျေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ ၊ မျက်နှာဖုံး တချို့ကို ခွာချနိုင်ခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား ၊ အဲလို မျက်နှာဖုံးတွေ ခွာချနိုင်ခြင်းက ပင်လျှင် နက်နှက်မဲ့တို့ရဲ့ အောင်ပွဲ တရပ် ပေမို့ လက်နက်မဲ့ များမရှုံး ပါဘူးလို့ ပြောရင်း ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဇေတာရာပါ..။
Posted by နှင်းမိုး at 2:36:00 am
အဲဒီကိစ္စက အတော်ကြေကွဲစရာပဲ.. အိပ်ခါနီးမို့ ဒီလောက်ပဲနော်.. မနက်မှ ပြန်လာမယ်..။
8 September 2010 at 02:59
ချက်ကျလက်ကျရေးသွားတဲ့ ဒီပို့စ်ကို သိပ်အားရမိပါတယ်။
8 September 2010 at 12:44
“လက်နက်မဲ့နဲ့ လက်နတ်ရှိသူ ရန်ဖြစ်ရင် လက်နက် ရှိသူဟာ အမြဲတမ်းရှုံးပါသတဲ့
ကိုဇေ ရေးသမျှ မျက်စိနားပွင့်တယ်
8 September 2010 at 13:25
Ko Koe Aim(Mdy) said...
i come to your blog. i like this post. bravo.
ko koe aim(Mdy)
koe toe tot hta min ngat tot mal nae tu tal zay yae. zay ka procedure taw lo hehe..
9 September 2010 at 12:51
အခုမှ အားလို့ပြန်လာတယ်.. ကြားရတာ အတော်လေး စိတ်မကောင်းသလို ကြေကွဲတာပဲ.. မတရားတာတွေကို ခေါင်းငုံ့ခံနေလို့မရဘူး.. နောက်.. ဒီလို မျိုး မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကို ဗေဗေတို့တွေ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြသရမယ် ထင်တာပဲ..။ တော်တော်ရက်စက်တဲ့ သူတွေပဲ.. သတင်းတွေ နားထောင်ရတယ်... စိတ်မချမ်းမြှေ့ဘူး..
မောင်ဇေရော ပျော်နေသလား.. အဆင်ပြေပါစေနော်.. ဗေဗေ
9 September 2010 at 15:39
ဒီပို့စ်ဖတ်ရတော့ ပိုပြီး သတိရစေတယ်။
11 September 2010 at 11:59
ဋ ဌ ဍ
နှစ်ထပ်ကွမ်း မွေးနေ့ရှင်ကြီး ကိုကိုးအိမ်